Semalt Expert: 7 Internet Scams uye Nzira Yokudzivisa Kuwira Chigamba Kwazvo
Vanyengeri vangangodaro vari kutevera imwe neimwe tweet uye mberi, vachitsvaga mukana wokukunyengera. Pano ndiyo nzira dzakapiwa naIgor Gamanenko, iyo Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, achishandisa izvo zvaunogona kutsanangurira zvinomwe zvinokurumidza kukudziridza
Muedzo Wokusununguka Werusununguko! (Chengeta chete nekusingaperi)
Maitiro ayo anoshanda: Unoona webhumo yekutengesa kwemwedzi mumwechete wezvinhu zvisingashamisi-kazhinji idzi idzi dzinoita mazino kana chirongwa chekuvandudza hutano. Zvese iwe unobhadhara ndi $ 5.95 zvekutakura uye kutarisira.
Chaizvoizvo chiri kuitika: Akavharidzirwa mukudhindwa kwakanaka, kazhinji mumumvuri unosuka kubva pakuona, ndiwo mazwi anokupa iwe kuti ubhadhara $ 79 kusvika $ 99 pamwedzi pamhosva?
Hasi Kwete Chaizvo Chakanaka Tweet (Ichokwadi chiso chedu refu)
Maitiro ayo anoshanda: Unowana "tweet" kubva kumutsigiri we Twitter, achipesana nechinetso chePad free kana imwe mimwe mari inokosha:
Chaizvoizvo chiri kuitika: Kubudiswa kwekubatanidza "bot" (chirongwa chekushandisa robot), kuwedzera PC yako kune botnet ye "zombies" inonyengera inoshandisa kutumira email spam - aria ventilatori ceiling fans.
Maonero akajeka: Con artists vari kushandura URL-shortening administrations dzinobvumira vatengi ve Twitter kuti vagovana vanobatana
The Problem Area Sham (Icho chiri pedyo, chaiva pedyo)
Maitiro ayo anoshanda: Iwe uri kugara mumhepo yekupedzisira kana sewaffeffeuse, uye iwe unopinda munzvimbo yeWi-Fi iri pedyo. Inogona kunge isina rusununguko, kana inogona kutaridzika semari inobhadharwa seBoingo Remote.
Chaizvoizvo chiri kuitika: Nzvimbo yacho inongoratidzika chaizvo. Icho chinoramba chichimhanya chinosangana nechepamheni chemhosva kubva pane imwe nzvimbo inoshandiswa..
PC yako inotapukirwa! (Zvakare, tinogona kupa rubatsiro)
Iyo inoshanda sei: Iwindo rinomhanya pamusoro pechiratidzo chechokwadi chekurwisa antivirus chirongwa se "Antivirus XP 2010" kana "Chigadzirwa Chekuchengetedza," chinokuvhundutsa kuti mishonga yako yakasvibiswa nedambudziko rinokuvadza.
Chaizvoizvo chiri kuitika: Paunonyanya kugadzirisa, sangano renhema rinotanga malware-vindictive programming-pa PC yako.
Kudhaisa kweDhora (neine ring of misrepresentation)
Iyo inoshanda sei: Unowana mharidzo pakarepo pafoni yako kubva kubhangi yako kana kukwereta kadikeri.
Chaizvoizvo chiri kuitika: "Bhizinesi" inyanzvi inovimba kuti iwe uchafumura dare rako rekodha.
Isu Tiri Nyika (Zvose zvekupa rupo mazano)
Iyo inoshanda sei: Unowana email nemufananidzo wekushaya zvokudya zvakasununguka-kubva kuHaiti kana imwe nyika yokusika. "Zvingava zvakanaka kana iwe uchipa zvaunogona nhasi," unoteterera kukumbira kwekunaka, kuenderera mberi nechikumbiro chemari.
Chaizvoizvo chiri kuitika: Unhu hupi hupenzi hwakagadzirirwa kuchengetedza mari yako nekugadzirisa deta re data.
Maonero akajeka: Webhusaiti, email, uye zvinyorwa zvinopa ruzivo rwakapa hutsva hupenyu huripo hwekare hunobatsira
Rudo runowanikwa kutengwa (The cruelest con)
Iyo inoshanda sei: Unosangana nemumwe munhu pane chikwata chekufambidzana, pa Facebook, mune imwe nzvimbo yekushanyira, kana paanenge achitamba chiitiko chakanaka.
Chaizvoizvo chiri kuitika: Rudo rwako rutsva inyanzvi yemhizha. Pachave pasina kurira kunosvimha misodzi pamugumo wegege, pasina kufara kune vakawanda.
Maonero akajeka: Kubudiswa kwemashoko akareba pakushambadzira kwakawanda kwakazarura migwagwa mitsva yakajeka yevasthroat con artists vane ruzivo rwakanaka mukukwevera vanhu vakaparadzwa mumhuri dzenhema nehukama, kuti vatore mari yavo.